Justin Trudeau: Ra'iisul Wasaaraha Canada oo raaligelin ka bixiyay sawirka "wejiga bunniga ah" ee 2001-dii - BBC News Somali
Justin Trudeau: Ra'iisul Wasaaraha Canada oo raaligelin ka bixiyay sawirka "wejiga bunniga ah" ee 2001-dii
Lahaanshaha sawirka Time Magazine
Image caption Justin Trudeau wuxuu sawirkan galay sanadkii 2001-dii
Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada, Justin Trudeau ayaa raalligelin ka bixiyay in uu marsaday midabka "wejiga bunniga ah" ee gala ee uu kusoo bandhigay iskuul gaar ah, kaas oo 20 sano ka hor uu dhigan jiray.
Isagoo ka hadlayay sawirkaas, wuxuu Ra'iisul Wasaare Trudeau sheegay in "si qoto dheer uu uga qoomameynayo" ficilkiisa ayna "ahayd in uu si wanaagsan u fahmo".
Mr Trudeau oo ah wiilka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Pierre Trudeau, wuxuu ahaa 29 sano jir markii uu ka qeyb galay xafladda gala ee iskuulka ku yaalla magaalada Vancouver.
Sawirka wuxuu siyaasad ahaan weji-gabax ku yahay ra'iisul wasaaraha sababtoo ah wuxuu sameeyay sharciyo wax ku ool ah oo arrimo sax ah ku saabsan.
Isagoo la hadlayay saxafiyiinta ka dib markii warbixinta wargeyska Time Magazine la daabacay, Mr Trudeau wuxuu sheegay inuu u lebistay sawirka oo ah dhaqanka Aladdin xilli uu ka qeyb galayay habeenka Carabta oo loo garanayo gala.
"Aniga ayaa qaadaya masuuliyadda go'aankeyga aan arrintaas ku sameeyay. Ma ahayn in aan sidaa sameeyo.
"In aan si wanaagsan u garto ayey ahayd. Waa arrin aanan u maleyn in cunsuriyad ay tahay xilligaas, balse hadda waan gartay in ay tahay arrin la xiriirta cunsuriyad, aad ayaana uga xumahay."
Justin Trudeau oo diyaarad dhexdeeda kula hadlaya weriyayaal arrintaas wax ka weydiiyay
Markii la weydiiyay in marar kale uu arrin taa la mid ah sameeyay wuxuu ku jawaabay in ay jirtay xilli kale oo make-up uu marsaday markaas oo uu ahaa ardey ka qeyb galayay bandhigga xirfadda dabiiciga ah ee dugsiga sare.
Sawirka dhacdadaas ayaa ka dib lagu soo daabacay Twitter-ka.
Dad ayaa BBC u xaqiijiyay in sawirka uu yahay dhacdada labaad ee Mr Trudeau uu ka hadlay.
Wuxuu xirtay "weji madow" wuxuuna ku heesay Day-O, oo ah hees Jamaican ah oo caan ah, taas oo uu qaaday fannaanka Amerikaanka ah ee xuquuqda rayidka u ol'oleynayay, Harry Belafonte.
Muxuu yahay "wejiga bunniga ah"?
Sida "wejiga madow", "wejiga bunniga ah" wuxuu si cad u qeexayaa marka qof uu midabka wejigiisa baddalo oo uu madoobeeyo si uu ugu ekaado midabka qof kale.
Dhaqankaas waxaa lala xiriirinayaa bandhigyadii hore - oo la sameyn jiray qarniyadii la soo dhaafay - xilligaas oo jilaayaashii caddaanka ahaa ay wejiga marsan jireen midab madow, iyagoo iska dhigaya dadka madow ee Mareykanka, iyagoo ku xadgudbaya oo fikrado cunsurinimo sameynaya.
Dhowaanahan, waxaa jiray arrimo lagu dhalleeceeyay siyaasiyiin, dad caan ah, iyo shirkado, oo la xiriirta "wejiga madow", "wejiga bunniga ah" ama "weji jaalle ah".
Arbacadii, Mr Trudeau wuxuu sheegay in "ay tahay arrin aan caadi ahayn oo waxyeello u leh bulshooyiinka ku nool meelaha halista ah ee sidoo kale wajahaya faquuqa".
Mustafa Farooq, Agaasimaha fulinta ee Golaha Muslimiinta ee Canada, ayaa yiri: "In la arko Ra'iisul wasaaraha oo xiran Wejiga bunniga/madowga ah waa murugo weyn. Waa arrin cambaareyn mudan, waa dib u maqlidda taariikhda cunsuriyadda iyo beenta la aaminsanaa, taas oo aan la aqbali karin."
Wuxuu golaha intaa ku daray in ay garan karaan "in dadka ay isku bedeli karaan 20 sano gudahood". xoogaa ka dib waxay soo saareen farriin Tweet ah oo ay ugu mahadceliyeen Mr Trudeau, maadaama uu si degdeg ah raaligelin u bixiyay.
Falcelinta siyaasadeed sidey ahayd?
Sawirka wuxuu ahaa mid cunsuriyadeed 2001-dii, haddana wuxuu weli yahay cunsuriyad, ayuu yiri Andrew Scheer, hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah.
"Waxa maanta ay dadka Canada arkeen waa go'aan la'aan guud iyo sharaf la'aan, waana qof aan u qalmin in uu dalkan hoggaamiyo," ayuu yiri.
Hoggaamiyaha Xisbiga New Democratic, Jagmeet Singh, oo haysta diinta Sikh, wuxuu isaguna sheegay in sawirka uu yahay "dhib" iyo "aflagaado".
"Markasta oo la maqlo tusaalooyiinka wejiga bunniga ama madowga ah, waxay noqoneysaa ku jeesjeesidda qof waxa uu ku nool yahay iyo khibradda nolosha uu ka haysto," ayuu yiri Mr Singh oo saxafiyiinta kula hadlay ol'ole uu ku qabtay Toronto.
Sawirka waxaa sidoo kale dhalleeceysay hoggaamiyaha Xisbiga Green Party, Elizabeth May.
Ka hor imaanshaha sumcadda uu leeyahay
Falanqeynta weriyaha BBC ee Toronto, Jessica Murphy,
Weli waa xilli hore in la dhoho arrintan waxay burbur u horseedeysaa Justin Trudeau, balse shaki kuma jiro loollanka adag ee doorasho ee uu wajahayay in uu sii adkaaday.
Shacabka Canada way sheegeen in ay si dhow u eegayaan marka Mr Trudeau uu sameeyay wax ka hor imaanaya sumcaddiisa siyaasadeed.
Waa in sidoo kale uu nafsad ahaantiisa isu sharaxo dad badan oo reer Canada ah oo dareemi kara in si aad ah uu u dhaawacay sawirka.
Jagmeet Singh - oo si furfuran uga hadlay cunsuriyadda uu kala kulmay Canada-da oo uu ku barbaaray - wuxuu qoray in taasi "aysan ku saabsanayn oo keli ah ra'iisul wasaare".
"Tani waxay la xiriirtaa qof kasta oo dhallinyar oo loogu jeesjeesay midabkiisa aawadii, sidaasna waxaa sameeyay canugga madaxa ay ugu duuban tahay cumaamadda."